Shirka midaynta aragtida bilaha Hijriga oo Istanbul ka furmay+Sawirro | Baydhabo Online
Shirkan oo maanta ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxaa furey ra’iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi, iyadoo ay ka qeybgaleen wufuud ka kala socota ilaa 60 dowladood oo kamid ah wadamada caalamka.Agaasimaga guud ee wasaaradda Owqaafta iyo arimaha diinta ayaa Soomaaliya u matalayay ka qeybgalka shirkan looga hadlayay sidii loo mideyn lahaa argatida bilaha hijriga oo inta badan la isku khilaafo marar badan.
Cumar Faruuk Sheekh C/casiis Cisman, oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in shirkan oo labo maalin socon doono ka qeybgaliyaasha ay diiradda ku saari doonaan sida aragti mid ah looga yeelan lahaa bilaha hijriga.
“Gaar ahaan xilliyada aragtida bisha Ramadaan ka, xilliga aragtida bisha Shawaal iyo bisha Dul-xija ee xilliga Xajka oo aad in badan arkeysid in ay dhacdo laba malmood ama sadax maalmod in la kala soomo ama la kala afurto ama iyadoo carafa lataaganyahay xajka la joogo dadkana ciidaan Carafo dad kalena dhahaan maya maanta ma ahan ciidul Adxa,” ayuu yiri Cumar Faaruuq.
Waxaana culimada waa weyn ee shirkan ka qeybgalay kamid ah Sheekh Yuusuf Al-Qardaawi iyo fuqaho si weyn looga yaqaano caalamka Islaamka.
Shirka Waxuu socon doonaa 28-30 bishan May, iyadoo gabagebadiisana laga soo saari doono go’aano ama bayaan wadajir ah oo arintaan xal looga gaarayo.